Apple - Izaho dia Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 13)
Phil Schiller dia nijanona teo amin'i Marbella any Espana mba hankafy hetsika iray miaraka amin'i Audi
Ny filoha lefitra Apple an'ny Marketing eran-tany Phil Schiller dia hita tany Marbella, Espana tamin'ny hetsika nampiantranoin'i Audi
Barry Jenkins, iray amin'ireo mpandray anjara fototra "Behind the Mac" dia manome voninahitra an'i James Baldwin
Barry Jenkins izay niseho tamin'ny fampielezan-kevitra "Behind the Mac" dia miresaka momba an'i James Baldwin sy ny maha-zava-dehibe ny fampifanarahana ireo teknolojia vaovao amin'ny sarimihetsika
Apple dia hanery ny mpamorona rehetra hiaro ny kaontiny amin'ny fanamarinana dingana roa
Raha manana kaonty mpamorona Apple ianao dia hanery anao handrehitra ny fanamarinana XNUMX-dingana izy ireo mba hitazomana ny kaontinao.
Ny serivisy horonantsary an'i Apple dia haseho amin'ny 25 martsa araka ny tsiliantsofina
Araka ny tatitra farany, toa ny serivisy an-tsarimihetsika (streaming) an'ny Apple manokana no aseho amin'ny 25 martsa, ankoatry ny hafa. Jereo!
Apple Pay no hipetraka any amin'ny Repoblika Tseky amin'ny 19 Febroary
Ho tonga any amin'ny Repoblika Tseky ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy tariby Apple manomboka ny 19 febroary.
Podcast 10 × 19: Amin'ny 25 martsa dia hanana keynote isika
Herinandro iray hafa, ny ekipan'ny Soy de Mac sy ny Actualidad iPhone, dia nihaona hanoratra podcast vaovao miaraka amin'ny vaovao farany avy any Apple
Tolotra vaovao avy any Koogeek hifehezana ny tranonay sy hikarakarana ny fahasalamantsika mandritra ny fotoana voafetra
Lisitry ny tolotra vaovao amin'ny automatisation an-trano izay omen'i Koogeek ho anay mandritra ny fotoana voafetra hifehezana ny trano sy hikarakarana ny fahasalamantsika
Instagram dia hanandrana hampiditra Direct ao amin'ny pejin-tranonkala desktop
Instagram dia hanao fanandramana kely mba hampidirana Direct amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny birao amin'ny Mac sy Windows. Jereo!
Malahelo MagSafe amin'ny Mac misy USB-C ve ianao? ThunderMag dia vahaolana
Malahelo MagSafe amin'ny Mac misy USB-C ve ianao? ThunderMag dia vahaolana ho an'ireo Mac farany misy port USB-C.
25 martsa: io no daty voalaza fa voafidy hanolotra ireo maodely famandrihana Apple vaovao
Araka ny tatitra farany, Apple dia hanao famelabelarana amin'ny 25 martsa mba hamoaka ny vaovao amin'ny modely famandrihana ihany.
Na i Google aza dia manondro fa mahomby ny AirPods
Ny fikarohana Google dia manondro fa ny Apple AirPods dia tena fahombiazana ary ireo fikarohana ireo dia nitombo 500% hatramin'ny nanombohany
Ny patanty Apple farany dia mampiseho amintsika ny fomba azo ampiharana Face ID amin'ny fiara
Ny patanty Apple farany dia nampianatra anay ny fomba azo ampiharana ny iPhone Face ID amin'ny fiara sy fiara hafa, hahatonga azy ireo ho azo antoka kokoa.
3-7 Jona no daty mety ho an'ny WWDC 2019
Apple dia mitahiry ny McEnery Convention Center any San Jose, California ho an'ny WWDC 2019 amin'ny volana Jona amin'ity taona ity
Apple dia efa manana ny lohan'ny marketing amin'ny fampitomboana ny tena zava-misy
Toa efa nanjary reraka tamin'ny mpamorona i Apple fa tsy nanaiky ny sehatra fampitomboana tena izy izay natolony azy ireo ary namorona toerana vaovao hampiroboroboana azy.
Ny 29 martsa dia toy ny daty fandefasana ny AirPods, AirPower ary ny iPad vaovao
Ny daty voalohany amin'ny famoahana ny volana martsa dia apetraka amin'ny faran'ny volana iray ihany. Mbola lavitra izany rehetra izany fa efa manomboka ny filokana
Amazon dia mahazo ny eero mafy orina mba hanatsarana ny fifandraisan'ny automatisation an-trano
Amazon dia tokony nividy ny orinasan'ny router sy ny fitaovana Wi-Fi eero mba hanatsarana ny fitaovana mandeha ho azy ao an-trano. Jereo!
Tadiavo ny fotoam-pivarotana sary, kanto ary famolavolana, fahasalamana sy fanatanjahan-tena, fandaharana, mozika sns ao amin'ny Apple Store akaiky anao
Androany amin'ny fivoriana Apple dia maimaimpoana ho an'ny mpampiasa rehetra ary ao amin'izy ireo isika dia afaka mianatra mahazo tombony betsaka amin'ny fitaovantsika
Manatevin-daharana ny fiaraha-miasa i Tim Cook hiarovana ireo mpifindra monina any Amerika
Nanatevin-daharana ny fiaraha-miasa amin'ireo CEO lehibe i Tim Cook hiarovana ireo mpifindra monina sy "Dreamers" any Amerika. Jereo eto!
Apple dia mety manandrana ny prototypes Mac amin'ny Face ID sy ny touchscreen
Raha ny tsiliantsofina vaovao dia miasa amina prototype maro Mac ry zalahy avy ao Cupertino miaraka amin'ny solosaina finday sy ny teknolojia Face ID
Ny tobim-pitsarana AirPower dia mitohy miditra amin'ny filokana
Tsaho misimisy kokoa momba ny tobim-panafahana AirPower izay miaraka amin'ireo antsipirihany mety efa navoakan'ny AirPod sasany amin'ny mainty
Ny taranaka faharoa AirPods dia afaka nahita ny hazavana tamin'ny lohataona, mainty ary tsy rakotra pirinty
Ny taranaka faharoa an'ny AirPods 2 dia mety misy amin'ny loko mainty ary misy fonosana tsy manidina mba hanatsarana ny fihazonana
Mihidy izao ny magazay Apple ao Passeig de Gràcia
Androany Alatsinainy 11 Febroary 2019 dia efa hitantsika fa mihidy ny Apple Store ao Passeig de Gràcia mihavao amin'ny fanavaozana. Hisokatra indray ny magazay afaka efa-bolana
4 volana an'ny Apple Music ho an'ny mpampiasa Shazam
Apple dia nanome mpampiasa manana ny fampiharana Shazam ary manaraka ny gala Grammy omaly alina famandrihana 4 volana ho an'ny Apple Music
Ahoana ny fomba hijerena mivantana ireo Grammy avy amin'ny finday Mac, iPhone, iPad, Apple TV ary iPod
Jereo eto ny fomba ahafahanao mijery ny Grammys mivantana avy amin'ny iPhone, iPad, Mac, Apple TV na iPod mikasika anao haingana sy mora, miaraka amin'ny CBS na Movistar +.
Ny MacBook Air sy Mac mini nohavaozina vaovao dia tonga ao amin'ny Apple Stores any amin'ny firenena maro
Ny MacBook Air sy Mac mini 2018 nohavaozina vaovao izao dia azo vidiana koa avy any Etazonia sy Kanada, ary koa ny firenena eropeana sasany.
Google Chrome dia hanohana ny maody maizin'ny macOS Mojave tsy ho ela
Ny beta an'ny Google Chrome ho an'ny Mac dia efa misy fanondroana sasany ny maody maizin'ny macOS Mojave, izay ho tonga miaraka amin'ny kinova 74 an'ny mpitety.
Nenjehina i Apple satria ny fanamarinana lafin-javatra roa dia miadana loatra
Nenjehina i Apple satria ny fanamarinana lafin-javatra roa dia miadana loatra ary aorian'ny fisoratana anarana dia manana 14 andro fotsiny isika hanafoanana ny serivisy
Fiaingana ao amin'ny Bill Stasior, Angela Ahrendts, fanavaozana macOS ofisialy, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ny fanangonana ny vaovao manandanja indrindra amin'ny herinandro dia avy any Mac aho.Anisan'izany, ny vahaolana amin'ny bug bug FaceTime na Ahrendts miala amin'ny orinasa
Fampandrenesana mivantana amin'ireo mpampiasa: ity no tetika vaovao sy mampidi-doza ary manafika an'i Apple hahazoana mpamandrika Apple Music bebe kokoa
Apple dia nandefa fampandrenesana tamin'ny mpampiasa sasany mba hahafahan'izy ireo misoratra anarana amin'ny Apple Music, na dia teknika fanararaotana aza.
Ny fifandraisana Wi-Fi ao amin'ny macOS Mojave dia tsy mandeha ho azy foana
Ny fifandraisana Wi-Fi ao amin'ny macOS Mojave dia tsy mandeha ho azy foana. Afaka misafidy amin'ny safidintsika isika raha te hanana Wi-Fi hifandray mandeha ho azy.
Azonao atao izao ny mahazo ireo headphone Bose ireo amin'ny vidiny tsy hay tohaina ao Amazon: mety tsara ho an'ny Valentine
Ankehitriny ianao dia afaka mahazo ny Bose QuietComfort 25 miaraka amin'ny fihenam-bidy mihoatra ny 50% amin'ny alàlan'ny Amazon, izay hevitra mahavariana ho an'ny Andron'ny mpifankatia. Araraoty!
Fihetseham-po sy ID amin'ny tarehy amin'ny HomePod? Ity no hitantsika tao amin'ny patanty Apple
Ao amin'ny Apple dia manana fahazarana manao patanty ny zava-drehetra izy ireo ary amin'ity tranga ity dia manampy patanty hampiasa fihetsika, Face ID ary LED amin'ny HomePod
Ny retina MacBook Air voalohany sy Mac mini dia tonga tao amin'ilay faritra namboarina indray ao amin'ny Apple Store
Ny retina MacBook Air voalohany sy Mac mini an'ny 2018 dia tonga tao amin'ny faritra nohavaozina ao amin'ny Apple Store. Ny vidiny dia manomboka amin'ny € 759 ho an'ny mini ka hatramin'ny 1749 €
Tena hanome valisoa ilay tovolahy nahita ny bug FaceTime i Apple
Grant Thompson dia hahazo valisoa ara-bola amin'ny fahitana ny bug bug FaceTime izay nitondra aretin'andoha be dia be tany Apple
Apple dia manakarama an'i Christine Curry mpitsindroka vohoka mba hifantoka amin'ny fahasalaman'ny vehivavy
Ny fahasalaman'ny vehivavy dia nanjary antony iray hijerena ireo taranaka ho avy ao amin'ny Apple Watch ary ny fanaovan-tsonia farany dia manaporofo izany.
Ny maha-eo ambonin'ny Microsoft sy Amazon eo amin'ny tsenan'ny stock dia tsara foana
Apple dia mitombo eo amin'ny tsenan'ny tahiry ary mihombo ary ny alarobia lasa teo dia napetraka ambonin'ireo mpifaninana aminy lehibe indrindra tany Etazonia
Hitan'izy ireo ny fitrandrahana macOS Mojave izay afaka miditra amin'ny teny miafina keychain
Hitan'izy ireo ny fitrandrahana macOS Mojave izay afaka miditra amin'ny teny miafina keychain. Tsy te hizara an'ity fampahalalana ity amin'i Apple ny mpikaroka
Safari dia hamela ny fiasa "Aza manara-maso" ao anaty tatatra
Ny browser Safari ho an'ny macOS sy iOS dia handao an'i Safari dia hamela ilay fiasa "Aza manara-maso" izay misoroka ny pejy tsy hanaraka anay
Tsy ho ela ny tambajotra Euro 6000 dia hanana ny fanohanan'ny Apple Pay
Ireo mpampiasa ny karatra tambajotram-bola Euro 6000 dia tsy ho ela dia hanohana handoa vola amin'ny alàlan'ny serivisy Apple Pay
Noho izany antony izany, ny chip T2 dia manakana ny fanamboarana sasany amin'ny serivisy tsy nahazoana alalana
Noho izany antony izany, ny chip T2 dia manakana ny fanamboarana sasany amin'ny serivisy tsy nahazoana alalana. Ao amin'ny Mac ny serivisy teknika dia manana rindrambaiko manokana.
Ny fiara Apple Maps dia hitety an'i Espana rehetra ao anatin'ny roa volana
Omaly dia nampahafantarinay anao ny fanitarana ny serivisy sarintany an'i Apple, na amin'ny seranam-piaramanidina na any amin'ireo ivontoeran'ny fiantsenana. Soa ihany,…
Spotify eo ho eo amin'ny mpanjifa 100 tapitrisa
Spotify dia nanambara ny isan'ny mpampiasa mandoa amin'izao fotoana izao mampiasa ny sehatra misy azy: 96 tapitrisa.
Podcast 10 × 18: Betas, mikorontana amin'ny Facebook sy Google, ary mbola tsy manana FaceTime izahay
Manolotra fizarana vaovao amin'ny podcastapple izahay izay miresaka momba ny FaceTime, ny fialan'ny Apple of Angela Ahrendts ary vaovao maro hafa
Karatra fanomezana amin'ny fividianana Mac na iPad amin'ny fampiroboroboana "Back to School" any Japon
Apple dia manomboka ny fampiroboroboana any an-tsekoly any Japon ho an'ireo mpianatra, ray aman-dreny, mpampianatra ary mpiasa ao amin'ny firenena
Toa nividy toerana fivarotana i Apple tao amin'ny Hudson Yards an'i Manhattan
Toa nividy toerana fivarotana i Apple tao amin'ny Hudson Yards an'i Manhattan. Ny tetik'asa dia mety ho afaka amin'ny Apple amin'ny lohataona
Ny toeram-pivarotana sy seranam-piaramanidina vaovao izao dia manohana ny sarintany anatiny an'ny Apple Maps
Apple dia nanitatra ny fampahalalana izay atolotray antsika na amin'ny atin'ny ivon-toeram-pivarotana sy ny seranam-piaramanidina ary koa amin'ny serivisy fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny fampiharana ny sarintany.
Banco Mediolanum dia mifanaraka amin'ny Apple Pay izao
Banky iray hafa izay manatevin-daharana ny serivisy fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Apple Pay. Amin'ity tranga ity dia ny Banco Mediolanum ary ny mpanjifany dia afaka manampy ny karany ankehitriny
Ny lehiben'ny Apple Store, Angela Ahrendts, dia handao an'i Apple amin'ny volana aprily
Ny tompon'andraikitra ambony indrindra amin'ny magazay ara-batana sy an-tserasera an'ny Apple, dia nanapa-kevitra ny handao ny orinasa monina any Cupertino, taorian'ny niasany 5 taona.
Apple dia tsy maintsy mandoa hetra mihoatra ny 570 tapitrisa dolara any Frantsa
Apple dia handoa 570 tapitrisa euro mahery any Frantsa mandritra ny taona maro hisorohana ny hetra ao amin'ny firenena. Ny orinasa mihitsy no nanamafy izany
Noterena hampiasa serivera Rosiana i Apple mba hitahiry ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa ilay firenena
Mba hanarahana ny lalàna rosiana, Apple dia mila manitatra karazana fampahalalana izay mitahiry olom-pirenena rosiana ao amin'ny firenena ankehitriny.
Apple dia afaka manome valisoa ara-bola ny tanora mahita ny kilema FaceTime
Araka ny vaovao farany, dia toa afaka manome valisoa ara-bola an'i Apple ilay tanora nahita ny tsy fahombiazan'ny vondrona FaceTime.
Ireto ny kisarisary amin'ny doka Super Bowl Macintosh 1984
Ireto ny saripika momba ny doka Super Bowl Macintosh tamin'ny 1984. Samy nanaiky ny doka Mac voalohany ny CEO roa John Sculley sy Steve Jobs
Siri CEO nandao an'i Apple
Bill Stasior, filohan'ny Siri nandritra izay 7 taona lasa izay, dia nanambara fa handao an'i Apple izy, ary i John Giannandrea no tompon'andraikitra amin'izany.
Amazon Prime Video dia havaozina ho an'ny Apple TV mamela ny fampiasana ny asan'ny X-Ray
X-Ray dia nahatratra ny Apple TV ho an'ireo mpampiasa Amazon Prime Video, afaka nahafantatra ny antsipirian'ny andian-tsarimihetsika iray noho ny IMDb.
Azonao atao ny mahalala izay endritsoratra ampiasain'ny tranokala amin'ny Google Chrome
Jereo eto ny fomba hahitanao mora ny endritsoratra na ny typeface ampiasain'ny tranokala amin'ny Google Chrome.
Apple dia tsy hahazo vola amin'ny fivarotana HomePod sy Apple TV 4K
Apple dia tsy hahazo vola amin'ny fivarotana HomePod sy Apple TV 4K. Na dia mandritra ny ora farany aza dia nolavina, ny Apple TV dia hamidy amin'ny vidiny ary ny HomePod amin'ny fatiantoka.
Mety hisy dikany ankehitriny ve ny fanavaozana ny iPod touch? Angamba, fa tsy toy ny hatramin'izay
Mety ho lojika ve raha avy amin'ny Apple no nanavaozan'izy ireo ny iPod touch? Eto aho dia manome ny hevitro momba an'io, ary ny fomba hamaritana ny taranaka faha-7 sy hisy dikany.
Johny Srouji mijanona, manily ny Mac Pro ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Mandrotsaka indray ny fanatontosana ny vaovao tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny Mac avy any Mac aho ary miaraka amin'izy ireo ny sasany manan-danja ho an'i Apple
Ity fotokevitra vaovao ity dia mampiseho amintsika ny iPod touch izay tianay rehetra ho hita, fa mety tsy ho hitantsika mihintsy
Jereo eto ny hevitra farany noforonina tamin'ny iPod touch tamin'ny taranaka faha-7, mampiseho zavatra izay mety tsy hisy akory.
Ahoana ny fomba fisintomana pejy web rehetra hitsidihana azy io amin'ny Mozilla Firefox amin'ny Mac
Ho hitanao eto ny fomba ahafahanao misintona mora foana izay pejin-tranonkala hitsidihana azy raha tsy misy fifandraisana Internet amin'i Mozilla Firefox amin'ny Mac.
Apple manamboatra bug iCloud izay misy hacker nahazo vaovao tsiambaratelo
Apple manamboatra bibikely iCloud izay ahazoan'ny mpijirika fampahalalana tsiambaratelo. Apple dia nanamboatra ny lesoka tamin'ny 23 Novambra
Ny Twitter dia namarana ireo sehatra hahazoana mpanaraka amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fidirana amin'ny tambajotra sosialy
Twitter dia nijoro nanoloana ireo sehatra hahazoana mpanaraka amin'ny alàlan'ny fanakanana tanteraka ny fidirana amin'ny API, mba hampitsaharana ny spam.
Ahoana ny fomba hampiasana maody maizina ao amin'ny Firefox ho an'ny macOS
Raha te-hampandeha ny maody maizimaizina omen'ny Firefox anay ianao, etsy ambany dia asehonay anao ny dingana rehetra hanarahana azy hahavita azy haingana.
Ny fialantsiny avy amin'ny Apple ho an'ny tranga FaceTime izay azo vahana amin'ny herinandro ambony
Nanamafy i Apple fa ny olana amin'ny antso vondrona FaceTime dia azo vahana amin'ny herinandro ambony ary miala tsiny noho ny tsy fahombiazany
Google+ misy olana indray: mandefa mailaka manondro ny fanapahana amin'ny API izy ireo
Google+ dia mety ho voajono tamin'ny alàlan'ny bug API, satria nitatitra tamin'ny mailaka vaovao nalefan'izy ireo izy ireo.
Ny fandinihana vaovao dia mampiseho fa mandany, amin'ny salan'isa, mihoatra ny ampahefatry ny taona amin'ny Internet
Ny tatitra farany momba ny fampiasana Internet manerantany dia naneho taminay fa mandany fotoana be loatra amin'ny Internet izahay, jereo eto!
Ny kitendry tsy misy lakile no asehon'ny patanty Apple vaovao amintsika
Apple dia nametaka pataloha vaovao iray izay hametrahana ireo lakile mahazatra mba hampiasa vera saika fisaka
Sonos dia namoaka fanavaozana hanampiana YouTube Music
Sonos lasa nifanaraka tamin'ny serivisy YouTube Music sy YouTube Premium tao amin'ny fanavaozana farany navoakan'ny mpanamboatra mpandahateny
Mpiasa Apple iray voasambotra noho ny fangalarana vaovao avy amin'ny Project Titan
Injeniera Apple no voasambotra noho ny halatra fampahalalana tsiambaratelo an'ny orinasa mifandraika amin'ny fiara mizaka tena an'ny Project Titan
Tim Cook dia nilaza fa handray anjara amin'ny fanovana ny "fonosana fahitalavitra" i Apple
Tim Cook dia nilaza fa handray anjara amin'ny fanovana ny "fonosana fahita lavitra" i Apple izay hitranga amin'ny volana ho avy. Vonona ny vokatra paoma
Apple Music dia mahatratra 50 tapitrisa ny mpanjifa mandoa vola
Ny serivisy fandefasana mozika an'i Apple dia nahatratra 50 tapitrisa mpanjifa nandoa.
Apple dia mandray ny tratran'ireo fitaovana mavitrika 1.400 tapitrisa manana an'izao tontolo izao
Ny orinasa Cupertino dia namaky firaketana vaovao ho an'ireo fitaovana mavitrika eran'izao tontolo izao, nihoatra ny isa tamin'ny taon-dasa ary nahatratra 1.400 tapitrisa
Podcast 10 × 17: manome fotoana sarotra an'i Apple ny FaceTime
Herinandro iray hafa, nihaona ny ekipa Actualidad iPhone sy Soy de Mac handraikitra ny fizarana vaovao amin'ny podcast Todo Apple.
Vehivavy iray sy ny zanany lahy dia nanandrana nifandray tamin'i Apple herinandro lasa izay momba ny bug FaceTime, fa ny fanampiana "tsy nanampy"
Ny lesoka fiarovana tamin'ny antso nataon'ny Group FaceTime dia hitan'ny zatovo 14 taona, saingy tsy nanamora ny fitateran'izy ireo ny Apple.
Toy izany no nijanonan'ny valim-bola Apple izay nisondrotra ny fivarotana Macs, serivisy ary Apple Watch
Ny valiny ara-bola an'i Apple aseho anio no ratsy indrindra ao anatin'ny 10 taona ary toa ho sarotra koa ny telovolana manaraka
Androany ao amin'ny Apple dia havaozina miaraka amin'ny fivoriana vaovao 50
Androany ao amin'ny Apple dia havaozina amina fivoriana vaovao 50 izay ho fantatra amin'ny fizarana 3: fahaiza-manao, dia an-tongotra ary Labs. Maherin'ny 18.000 ny olona manatrika isan-kerinandro
Tonga ny andro hanolorana ny valim-bola Q1 ary tsy izany no andro tsara indrindra lazainay
Apple androany dia manana andro sarotra tokoa hanatanterahana azy ary anio no asehon'izy ireo ny valin'ny Q1 aorian'ny vaovao momba ny bug FaceTime
Apple dia mitazona ny zon'ny sarimihetsika Hala, iray amin'ireo tsy ampoizina amin'ny Sundance
Apple dia nividy ny zo ho an'izao tontolo izao amin'ilay tantara an-tsehatra Hala izay mampiseho amintsika ny fiainan'ny zazavavy silamo 17 taona any Etazonia.
Nahemotra ny famokarana ny Mac Pro 2013 noho ny tsy fisian'ny visy ao Etazonia.
Nahemotra ny famokarana ny Mac Mac 2013 noho ny tsy fisian'ny visy ao Etazonia. Ity vaovao ity dia tonga eo afovoan'ny adihevitra momba ny famokarana any Etazonia na ivelan'ny Etazonia.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny FaceTime amin'ny Mac
Asehonay aminao ny safidy ananantsika amin'ny Mac hampiatoana ny antso FaceTime aorian'ny tsy fahombiazan'ny fiarovana an'i Apple
Ny serivisy fandefasana horonantsary an'i Apple dia afaka nahita ny mazava tamin'ny volana aprily
Raha ny angom-baovao, dia hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny tapaky ny volana aprily ary any Etazonia ihany izao ny serivisy video streaming an'i Apple.
Apple dia mandefa ny FaceTime hamahana ny olan'ny fiarovana
Ny bandy Cupertino dia nanala antso vonjimaika vonjimaika tamin'ny alàlan'ny FaceTime, noho ny bug izay namela antso lavitra avy tamin'ny mpandray
Apple phishing ho mpilalao fototra amin'ity fiandohan'ny taona ity
Mpampiasa maro no mitatitra onja mailaka vaovao miaraka amina phishing na fangalarana ny maha-izy azy ka tokony ho mailo isika momba izany
Johny Srouji an'i Apple dia tsy handray anjara amin'ny asan'ny CEO Intel
Ary farany, toa ny lohan'ireo mpikirakira ny Apple, Jhony Srouji, dia tsy handeha ho any Intel amin'ny maha-lohan'ny orinasa azy.
Dingana enina tokony horaisina alohan'ny fivarotana na fanomezana ny Mac
Asehonay anao ny dingana enina tokony hataonao mba hadio tanteraka amin'ny Mac sy data ny Mac anao alohan'ny hamarotana azy na hanome azy
Hanana ny Apple Store ihany koa ny Repoblika Tseky tsy ho ela
Ny tale jeneralin'ny Apple Tim Cook dia mivory amin'ireo minisitra maro sy tompon'andraikitra ambony amin'ny diany ary amin'ny raharahan'ny minisitra Czech dia miresaka momba ny Apple Store vaovao any Prague izy ireo
Apple News dia tsy ho ela dia hampiditra fomba iray hisoratana anarana amin'ny magazine
Miaraka amin'ny beta an'ny iOS 12.2, nampiditra fomba vaovao ao amin'ny Apple News i Apple izay ahafahan'ny mpampiasa misoratra anarana amin'ny magazine sasany.
Ny MacOS 10.14.4 beta dia mamela anao hamela autocomplete ao amin'ny Safari miaraka amin'ny Touch ID
Ny beta an'ny macOS 10.14.4 dia mamela anao hampavitrika ny autocomplete ao amin'ny Safari miaraka amin'ny Touch ID, mba hamenoana ny endrika na fidirana amin'ny serivisy avy amin'ny sensor sensor
Vizio dia manokatra beta iray hahafahan'ireo mpampiasa ny fahitalavitra manandrana manohana ny AirPlay sy HomeKit
Raha manana ny iray amin'ireo fahitalavitra Vizio farany ianao dia ho afaka hizaha toetra ny teknolojia AirPlay 2 miaraka amin'ny HomeKit sy SmartCast 3.0 amin'ny beta.
Ny kaody iOS 12.2 dia manambara iPod touch vaovao azo atao nefa tsy manana Touch ID
Ny kaody beta voalohany amin'ny iOS 12.2 dia nanambara momba ny iPod touch amin'ny taranaka fahafito vaovao.
Famatsiam-bola tsy misy zanabola, fampisehoana MacBook Pro, AirPods 2, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Indray Alahady indray dia nangoninay ny sasany amin'ireo vaovao miavaka indrindra amin'ny herinandro tao amin'ny Soy de Mac momba ny Apple sy ny haitao amin'ny ankapobeny
Intel dia tsy mahomby amin'ny ampahany noho ny Apple
Intel dia tsy mahomby amin'ny ampahany noho ny Apple. Ny fiantraikan'ny tsena dia misy fiantraikany amin'ny Intel amin'ny fanaovana singa ho an'ny Apple
Mampitandrina ny famoahana AirPod vaovao ny kaody iOS
Ny kaody iOS 12.2 beta dia mampiharihary ny endri-javatra Hey Siri ho an'ireo AirPod vaovao ka fitsapana iray hafa ihany koa izao efa akaiky hatombokay
Alao an-tsaina hoe nahavita fifanarahana tamin'i Apple hamokatra horonantsary sy horonantsary fanadihadiana ireo fanadihadiana
Ny fifanarahana farany farany azony tamin'ny serivisy fandefasana horonantsary manaraka azy dia ny Think Documentaries, an'i Ron Howard
Ny hofan-trano isan-taona ho an'ny Apple Store vaovao any Chicago dia $ 2,5 tapitrisa
Ny vidin'ny fanofana ny Apple Store mariky ny marika any Chicago, dia mitentina 2,5 tapitrisa dolara, na eo aza ny fampiasam-bola 80 tapitrisa amin'ny fanamboarana.
Fanambarana vaovao momba ny Apple Pay Cash Ary any Espana amin'ny fotoana Apple?
Ny orinasa Cupertino dia nanangana fanambarana vaovao mifandraika amin'ny serivisy Apple Pay Cash ary mbola miandry ny hamoahana azy eto isika
Mahita malware macOS miafina izy ireo aorian'ny fisintomana ny doka
Hitan'izy ireo ny malware ho an'ny macOS miafina aorian'ny fisintomana ny doka ho an'ny programa Adobe Flash Player malaza aorian'ny fisintomana sy fametrahana ny rakitra
Sonos sy Apple dia manomana zava-baovao amin'ny headphones
Sonos sy Apple dia hanomana ny fandefasana telefaona sofina be loatra hoy ny mpandalina fanta-daza Mark Gurman
Google dia manakarama injeniera Apple hamolavola ny Fuchsia OS
Ny bandy ao amin'ny Google dia nanakarama injeniera Apple hiasa amin'ny fampandrosoana ny Fuchsia OS, ny rafitra multiplatform izay iasan'ny Google.
Mpiasa "Project Titan" maherin'ny 200 no tsy tafiditra amin'ilay tetikasa
Ny orinasa dia mamerina mandamina ny ekipa miasa fantatra amin'ny anarana hoe Project Titan ary mamela mpiasa maherin'ny 200 amin'izany
Apple Pay dia manitatra ny isan'ny banky misy azy any Canada, New Zealand ary Australia
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanitatra ny banky izay manohana an'i Apple Pay manerantany.
Hulu dia mandefa drafitra mora vidy hanaloka ny Netflix
Vao haingana i Hulu dia nanangana drafitra mora vidy miaraka amin'ny doka hahafahana mifaninana mivantana amin'i Netflix sy ny fiakarana farany any amin'ny firenena sasany.
Ny banky lehibe indrindra any Australiana dia mandray ny Apple Pay amin'ireo mpanjifany ihany
Ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy tariby Apple, Apple Pay, dia azo alaina avy amin'ny banky lehibe indrindra any Aostralia, efa ho 4 taona taorian'ny nanombohany tao amin'ny firenena
Apple dia manolotra tatitra momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny ho avy
Apple dia manolotra tatitra momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny ho avy. Fakafakao ny fotoana mety, nefa koa ny fandrahonana
Ny New York's East East Side Store Apple dia nahazo loka ho an'ny maritrano
Ny Store East East Side Apple dia nahazo loka tamin'ny fitazonana ny firafitry ny trano misy azy hatramin'ny nanokafana azy tamin'ny 2013
Podcast 10 × 16: Batterie, Fanatsarana ary maro hafa
Herinandro iray hafa dia navelanay ilay horonan-tsary sy ireo rohy mankany amin'ilay podcastapple izay nataonay tamin'ny talata alina izay niresahanay momba an'i Apple sy ny zavatra kely rehetra.
Apple no voalohany tao amin'ny lisitry ny orinasa ankafizin'izao tontolo izao nandritra ny roa ambin'ny folo taona nisesy
Ity no taona faha-XNUMX nisesy izay nahatonga an'i Aple nanao ny lisitry ny orinasa malaza indrindra ao amin'ny Fortune
Ny tariby manify loatra dia mety hiteraka olana eo amin'ny efijery MacBook Pro
Ny tariby manify loatra dia mety hiteraka olana eo amin'ny efijery MacBook Pro. IFixit dia nitantara ny olana ary mpampiasa maro no mitaraina amin'ny forum
Ity misy mety ho toa ny Mac cooled-cooled
Raha efa noeritreretinao ny mety ho endrik'ilay Mac nangatsiaka ranona dia nanana ilay hevitra nitovizan'ny mpamorona Pierre Cerveau ianao
Mitentina 50 tapitrisa euro ho an'ny Google any Frantsa noho ny fanitsakitsahana ny GDPR
Ny vatana izay mibaiko ny fiarovana ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa any Frantsa dia mampandoa onitra 50 tapitrisa euro amin'ny Google
Tsy very miaraka amin'ny AirPower ny zava-drehetra: resahina indray ao amin'ny tranonkala ofisialin'i Apple
Nipoitra tao amin'ny tranonkalany manerantany ny andinin-tsoratra masina vaovao momba ny toby fampiasan'i Apple, ny AirPower, jereo eto!
Niampy ny angona fifamoivoizana sy fitateram-bahoaka ho an'i Danemark, Soeda, Norvezy ary Failandy
Apple dia mbola manohy manampy fampahalalana momba ny tanàn-dehibe amin'ny fitaterana Maps ary amin'ity indray mitoraka ity dia i Danemarka, Suède, Norvezy ary Failandy
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fidirana mandeha ho azy ao amin'ny Chrome
Raha te-hanafoana ny fidirana mandeha ho azy ao amin'ny Google Chrome ianao isaky ny mampiasa serivisy Google, dia izao no fomba hanajanonana azy.
Apple dia manitatra ny famatsiam-bola tsy misy zana-bola hatramin'ny faran'ny volana martsa
Apple dia nanampy volana vitsivitsy ny fampiroboroboana ara-bola amin'ny zana-bola 0% amin'ny vokatra rehetra izay mihoatra ny 150 euro
Fantaro ny IP misy ny fifandraisana Internet sy ny tambajotra eo an-toerana amin'ny tsindry tokana
Raha te hahalala amin'ny fotoana rehetra ianao hoe inona ny fifandraisana IP amin'ny solosainao amin'ny Internet, noho ny fampiharana IPIP dia mora ny mahafantatra azy.
Mitady mpandahateny azo entina? Ankehitriny manana UE BOOM amidy any Amazon ianao!
Ankehitriny ianao dia afaka mahazo UE BOOMs sy UE MEGABOOM amin'ny alàlan'ny Amazon miaraka amin'ireo fihenam-bidy mahaliana indrindra, aza adino!
Ity fotokevitra ity dia mampiseho amintsika fa mety ho toy ny ahoana ny iPod touch amin'ny taranaka faha-7 amin'ny 'notch'
Jereo eto ny hevitra vaovao momba ny mety ho iPod touch andiany faha-7 vaovao miaraka amin'ny notch sy mitovy amin'ny iPhone XR.
Ahoana ny fomba hidirana sy hijerena Movistar + amin'ny Mac rehetra: mpitety sy torolàlana mifanentana
Jereo eto ny fomba ahafahanao miditra sy mijery ny atiny Movistar Plus avy amin'ny macOS: takiana, mpitety ary torolàlana mifanentana.
Apple dia mbola tsy manaraka ny fitsipiky ny EU momba ny fiarovana data
Apple dia mbola tsy manaraka ny fitsipiky ny EU momba ny fiarovana data. ONG aostraliana miasa ho an'i Apple hanaraka izany.
Mitahiry Passeig de Gràcia, eGPU Pro Blackmagic, iPod Touch vaovao ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Isaky ny alahady dia mitondra ny famintinana ireo vaovao miavaka indrindra izahay, tsaho ary fivoahana avy any Mac aho momba ny tontolon'ny Apple
Ny tahiry an'i Apple dia miverina amin'ny fanambarana momba ny fidiram-bola talohan'ny Cook
Ny tahiry Apple dia miverina amin'ny ambaratonga alohan'ny fanambarana nataon'i Cook momba ny fihenan'ny vola miditra. mandinika ireo anton-javatra mamaritra izany fihenan'ny vidiny izany izahay
Hita ao China sy Hong Kong izao ny HomePod
Apple's HomePod dia tonga tany China tamin'ny fomba ofisialy, firenena toa nivily lalana tamin'ny orinasa.
Nahazo fifanarahana tamin'i Apple i Simon Kinberg hamoronana andian-tantara foronina
Apple dia nanao fifanarahana tamin'i Simon Kinberg, mpamokatra horonantsary X-Men roa, hamoronana andiany sci-fi 10 fizarana.
Johnson & Johnson JNJ, Janssen Pharmaceuticals mpiara-miasa amin'ny fahasalamana Apple vaovao
Any Apple dia manohy manizingizina ny olan'ny fahasalamana amin'ny Apple Watch izy ireo ary ambonin'izany rehetra izany dia ny fahitana ireo olona voan'ny fibrillation atrial aloha.
Wear OS avy amin'ny Fossil Group dia amidy amin'i Google
Ny orinasa Fossil sy ny OS ho an'ny famantaranandro Wear OS dia azon'i Google vola mitentina 40 tapitrisa dolara
Fanafihana mahery vaika vaovao no mitaky kaonty mailaka 773 tapitrisa: jereo raha tafiditra ao ny anao
Fanafihana goavambe iray no nampiharihary kaonty mailaka 773 tapitrisa, ho fanampin'ny tenimiafin'ny sasany tamin'izy ireo.
Tim Cook mitsikera ny varotra ny angon-drakitra ataon'ny orinasa sasany
Ny CEO Apple Apple Tim Cook dia mitsikera ny fivarotana ny angon-drakitra ampiasain'ny orinasa maro ary miantso ny lalàna hifehy izany
Ny fiarovana manokana an'i Tim Cook dia mitentina $ 310.000 amin'ny taona 2018
Ny vidin'ny fiarovana an'i Tim Cook dia iray amin'ireo ambany indrindra amin'ireo orinasa lehibe indrindra ao Silicon Valley
Jason Katims, mpamokatra, dia mpikarama vaovao an'i Apple
Ny karama vaovao an'i Apple na honohono ho soniavina dia mpamokatra fanta-daza Jason Katims, no karama vaovao an'i Apple
Apple dia mifampiresaka amin'ireo mpiantoka fahasalamana amerikana hanolotra ny Apple Watch fanampiana
Apple dia mifampiresaka amin'ireo mpiantoka fahasalamana amerikana hanolotra ny Apple Watch fanampiana. Ny antsipiriany rehetra amin'ny fifanarahana dia tsy fantatra
Ahoana ny fomba hijerena haingana ny toetr'andro amin'ny Mac ary tsy mametraka na inona na inona
Jereo eto ny fomba ahafahanao mijery ny toetrandro mivantana avy amin'ny Mac anao ary tsy mametraka na inona na inona, miaraka amin'ny tetika tsotra roa.
Misy fanondroana momba ny AirPower miseho ao amin'ny tranokalan'ny Apple, mahatonga antsika hieritreritra fa manohy miasa amin'ny fampandrosoana azy ireo izy ireo
Ao amin'ny tranokala Apple Malaysia, nipoitra ny referansy mifandraika amin'ny tobim-pandefasana tsy misy tariby AirPower, izay mahatonga antsika hieritreritra fa an-dalam-pandrosoana.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fandefasana podcast amin'ny Apple Watch
Ity dia fomba tsara iray hihainoana sy hanamboarana ireo podcast izay tianay hampifanarahana amin'ny Apple Watch sy ny app Apple Podcasts.
Tahaka izany ny fijeriny ny andiana tadin'ny Apple Watch sy tranga ho an'ny AirPods avy amin'ny mpanamboatra Nomad
Nomad dia namoaka andalana vaovao an'ny tarika Apple Watch sy ireo tranga AirPods mifanentana vita amin'ny hoditra voajanahary.
Bill Murray sy Sofia Coppola hiaraka amin'ny sarimihetsika voalohany an'i Apple
Bill Murray dia hanatevin-daharana an'i Sofia Coppola amin'ny famoronana fiandohan'i Apple voalohany amin'ny indostrian'ny sarimihetsika.
Hanana ny boaty famandrihana tsy misy tariby ho an'ny AirPods ihany koa isika amin'ity taona ity?
Ny tsaho momba ny famokarana ny base AirPower dia afaka mitondra ny andiany faharoa amin'ny AirPods an'ny Apple
Ny fizarana Apple dia miverina tsikelikely miandry ny valandresaka valim-bola
Ny sandan'ny anjaran'i Apple tsirairay dia mitohy mitombo amin'ny taha miadana nefa maharitra ary azo antoka fa marika tsara ho an'ny orinasa izany.
Ny Apple Watch Series 4 dia namonjy ny ain'ny zazalahy iray niaraka tamin'ny fibrillation atrial
Ny Apple Watch Series 4 dia nahavita namonjy ny ain'ny lehilahy tamin'ny fampitandremana ny fibrosis atrial sy ny tahan'ny fitempon'ny fony.
10 × 15 Podcast: Apple amin'ny taona 2019
Herinandro iray hafa, nihaona ny iPhone manontolo sy izaho avy amin'ny ekipa Mac Actality mba hiresaka ny vaovao farany mifandraika amin'ny tontolon'i Apple sy ny manodidina azy.
TweetDeck ho an'ny fanavaozana macOS amin'ny maody maizina
TweetDeck ho an'ny macOS dia nohavaozina miaraka amin'ny maody maizina sy ny fanitsiana «bibikely». Izy io dia fampiharana tonga lafatra ho an'ny Community Manager
Miseho ho toy ny CEO mety ho Intel ny filoha lefitra zokiolona Hardware Johny Srouji
Tonga tany amin'ny tambajotra ny tsaho momba ny fanakaramana an'i Johny Srouji mety ho filoha lefitry ny hardware Apple ho CEO an'ny Intel
Apple dia mividy sidina 50 isan'andro avy any San Francisco mankany Shanghai
Ny orinasa Cupertino dia misidina tsy an-kijanona avy any San Francisco mankany Shanghai ary noho izany dia misy sidina 50 eo ho eo amin'ny kilasy fandraharahana
Ny BlackMagic eGPU Pro dia hovidiana afaka ora vitsivitsy ao amin'ny tranokala Apple
Ny BlackMagic eGPU Pro dia hovidiana afaka ora vitsivitsy ao amin'ny tranokala Apple. Amin'izao fotoana izao dia misy amin'ny tranokala US Apple.
Tsy ho ela ny Repoblika Tseky sy Slovakia dia hanana Apple Pay
Apple dia manohy ny fanitarana ny Apple Pay ary eo anelanelan'ny faran'ny volana febroary sy ny fiandohan'ny volana martsa dia ho tonga any amin'ny Repoblika Tseky sy Slovakia izy
Mieritreritra ny hibaiko ny tranonao? Miaraka amin'i Koogeek dia azo atao izany ary amin'ny vola kely dia kely
Raha mitady ny fomba ahafahanao manjaka ny tranonao ianao, amin'ny alàlan'ny fitaovana Koogeek dia tsy mila mandany vola be ianao ary hanana ny safidy rehetra azonao atao.
Hakatona vonjimaika ny fivarotana Apple ao Passeig de Gràcia manomboka ny 10 febroary
Avy amin'i Apple izy ireo dia mampitandrina anay fa ny fivarotana ananan'izy ireo ao Passeig de Gràcia dia hakatona vonjimaika amin'ny 10 febroary ho an'ny fanavaozana
Ho tonga any China ny HomePod amin'ny 18 Janoary
Ilay mpandahateny marani-tsaina Apple, HomePod, dia efa manana daty fanombohana ofisialy any Shina sy Hong Kong: ny 18 Janoary ho avy izao
Ahoana ny fomba fandraisam-peo memo amin'ny Mac
Ahoana ny fomba handraisana ireo memo feo miaraka amin'ny Mac anao. Avy amin'ny macOS Mojave dia manana rindrambaiko natokana handraisana feo memo feo izahay.
Ny toby famaritana AirPower dia mivoaka amin'ity volana Janoary ity
Ny toby famaritana AirPower dia mivoaka amin'ny famokarana amin'ny 21 Janoary. Tsy misy na inona na inona fantatra amin'izao fotoana izao momba ny boaty famenoana ny AirPods
Fahamerana indroa an'ny betas, miverina ny vinavinan'ny Samsung, mivelatra ny AirPlay 2 ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Avereno indray ny famerenana isan-kerinandro miaraka amin'ireo zava-nisongadina avy amin'ny Mac avy amiko toa ny kinova beta vaovao navoaka sy ny fahatongavan'i AirPlay 2 ankoatry ny vaovao hafa
Apple Music namoaka horonantsary miavaka momba ny Bohemian Rhapsody
Apple Music dia namoaka horonantsary manokana momba ny Bohemian Rhapsody. Lohateny mitondra ny lohateny hoe Rami Malek: Becoming Freddie.
Misokatra ny fanangonan-tsonia ho an'ny sonia hangataka amin'i LG hanisy fanampiana ho an'ny AirPlay amin'ny fahitalavitra amin'ny taona hafa
Ireo mpampiasa ny fahitalavitra LG taloha dia nanokatra fanangonana orinasa hampiditra ny teknolojia AirPlay ao amin'izy ireo.
Ahoana ny fanovana anarana ny fitaovana mifandraika amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny Mac
Androany dia ho hitantsika ny safidy ananantsika ao amin'ny System Preferences hanova anarana ny fitaovana rehetra mifandraika amin'ny alàlan'ny Bluetooth araka izay itiavantsika azy
Ity ny boky torolàlana nataon'i Apple hanentanana ireo mpivarotra Mac manerantany
Apple dia namorona boky torolàlana natao ho an'ny mpivarotra hanana fiofanana ilaina handresen-dahatra ireo mpanjifa mety hividy Mac.
Ny varotra Mac dia nianjera indray tamin'ny telovolana farany tamin'ny 2018
Ny telovolana farany tamin'ny taona 2018 dia tsy tsara amin'ny varotra solosaina Mac, raha voamarina ihany ny angona avy amin'ny fanadihadiana navoakan'i Gartner.
Ity no vahaolana rehefa milaza ny Mac App Store fa tsy manana apps novidiana ianao
Ity no vahaolana rehefa milaza ny Mac App Store fa tsy manana apps novidiana ianao. Manolotra vahaolana maromaro momba ny olana izahay.
Ny fitetezana isan-trano izao dia misy any India amin'ny alàlan'ny Apple Maps
Manomboka amin'ity fotoana ity dia efa afaka mampiasa Apple Maps isika hifindra monina manerana ny trano isan-trano noho ny fitarihan-torolàlana atolotray antsika.
Roku dia nizara fironana taorian'ny fanambarana ny fidiran'ny AirPlay 2 amin'ireo mpanamboatra lehibe
Iray amin'ireo fatiantoka lehibe indrindra tamin'ny fampidirana ny AirPlay 2 amin'ireo mpanamboatra fahitalavitra lehibe dia Roku
Nanatevin-daharana an'i Apple i Sandy Parakilas taorian'ny nandaozany ny Facebook
Avy any Cupertino dia aroso mba handravaka ny polisy Koreana noho ny fihoaram-pefy
Tamin'ny 1 martsa, fihaonana amin'ireo tompon-tany maro an'isa ao amin'ny Apple Park
Ireo no fahita lavitra rehetra izay hifanaraka amin'ny AirPlay izay nambara hatreto
Jereo eto izay maodely Smart TV avy amin'ny Samsung, LG, Sony ary Vizio izay hifanaraka amin'ny AirPlay 2.
Niaro ny fihetsik'i Apple i Tim Cook ary mihevitra fa ambanin-javatra ny tontolo iainana ny Apple
Niaro ny fihetsik'i Apple i Tim Cook ary mihevitra fa ambanin-javatra ny tontolo iainana ny Apple. Tim Cook dia manome tafatafa amin'ny CNBC
Xiaomi dia hanohy handika ny AirPods an'ny Apple miaraka amina kinova vaovao amin'ny findainy tsy misy tariby
Xiaomi dia hanohy handika ny AirPods an'ny Apple, satria tsy ho ela dia handefa kinova vaovao nohatsaraina amin'ny findainy tsy misy tariby: AirDots Pro.
Mihabetsaka ny fahitalavitra mifanaraka amin'ny AirPlay, ary hiampy tsikelikely
Ankehitriny dia mamela ny orinasa antoko fahatelo hampiditra ny haitao AirPlay amin'ny fahitalavitra i Appla, ary azo fehezina miaraka amin'i Siri aza izy ireo. Jereo eto!
Gaga! Samsung dia mampihena ny vinavinany vola amin'ity volana ity
Miantso ny Cam View varavarana ny peratra, mamerina miverina fakantsary fiarovana an-trano
Miantso ny Cam View varavarana ny peratra, mamerina mandefa fakantsary fiarovana an-trano
LG TVs dia ho mifanaraka amin'ny AirPlay 2 ihany koa
LG TVs dia hifanaraka amin'ny haitao AirPlay 2 an'ny Apple ankoatran'ny HomeKit.
Ny tonon-kira ao amin'ny Apple Music dia miparitaka any amin'ny firenena maro
Ny tononkira ao anatin'ny hiran'ny Apple Music sy ny fahafahany mitady azy ireo dia nahatratra firenena maro toa an'i Espana sy Mexico.
Podcast 10 × 14: Miresaka momba ny Apokalypsa Apple isika
Podcast 10x14: Miresaka momba ny paoma apokalipsy isika
OneDrive izao dia manolotra rakitra amin'ny fampiasa amin'ny fangatahana amin'ny macOS
Ny fahafaha-miasa miaraka amin'ireo rakitra voatahiry ao amin'ny OneDrive nefa tsy mila misintona ny atiny rehetra amin'ny Mac misy anao amin'ny macOS Mojave.
iTunes sy AirPlay 2 dia hifanaraka amin'ny Samsung TV
Tombantombana ara-bola, fiantsenana any Japon, taratasin'i Cook ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
ICloud executive executive dia nandao an'i Apple hanatevin-daharana ny fanombohana
Iray amin'ireo mpitantana ambony iCloud, Patrick Gates dia nanambara fa hiala amin'ny orinasa izy aorian'ny 14 taona ao Apple.
Aostralia, Nouvelle Zélande ary Brezila dia efa manana ny fampiroboroboana "miverina amin'ny oniversite" mihetsika
Tim Cook dia niresaka tamin'ny mpiasany tamin'ny taratasy iray
Ahoana ny fomba fampidinana sary amin'ny iCloud avy amin'ny Windows hahafahan'izy ireo misy amin'ny Mac sy fitaovana Apple hafa
Jereo eto ny fomba ahafahanao mampiditra sary na horonan-tsary ao amin'ny tranombokinao iCloud amin'ny fampiasana PC Windows na rafitra miasa hafa nefa tsy mametraka na inona na inona.
Andrasana ny valiny ara-bola farany ambany
Apple dia hanolotra karama ambany kokoa amin'ny telovolana voalohany, amin'ny kaonferansa 29 Janoary
Apple dia hanolotra karama ambany kokoa amin'ny telovolana voalohany, amin'ny kaonferansa amin'ny 29 Janoary. Andrasana ny fanitsiana ambany ny isa azo
Ilay antsoina hoe "kitapo vintana" any Japon dia tsy misy fa misy fihenam-bidy isan-karazany
Ireo antsoina hoe "kitapo vintana" any Japon dia tsy misy fa misy fihenam-bidy isan-karazany
Tratry ny taona 2019 daholo!
Afaho ny toerana ao amin'ny Mac tsy misy fampiharana an'ny antoko fahatelo
Afaho ny habaka amin'ny Mac anao tsy misy fampiharana an'ny antoko fahatelo, miaraka amin'ny safidinao About this Mac sy ny tabilao Storage.
iMazing, Fitaovana asongadin'i 2018, Apple Stocks, ary maro hafa! Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Milaza ny mpandinika fa i Apple no orinasa teknolojia haingana indrindra amin'ny taona 2019
Milaza ny mpandinika fa i Apple no orinasa teknolojia izay mitombo indrindra amin'ny tsenambola amin'ny taona 2019, mifototra amin'ny fivarotana serivisy sy ny fahitana amin'ny mpanjifa.
Araraoty ireo fihenam-bidy ireo amin'ny vokatra Koogeek sy Dodocool
Apple dia manamarina amin'ny fomba ofisialy ny fividianana Tesla! [INNOCENT]
Apple dia manamarina amin'ny fomba ofisialy ny fividianana Tesla!
Moa ve ianao manana ireo fiasa ara-pahasalamana ireo mihetsika ao amin'ny Apple Watch anao?
Moa ve ianao manana ireo fiasa ara-pahasalamana ireo mihetsika ao amin'ny Apple Watch anao? Asehonay anao ny fiasa azonao ampiasaina sy ny fiasa mihetsika.
Famoahana tsara indrindra an'i Apple tamin'ny taona 2018
Fampiharana tena ilaina ireto raha manana Mac vaovao ianao
Fampiharana tena ilaina ireto raha toa ka vaovao amin'ny Mac ianao. Mpanonta sary, fampifanarahana atiny, mpilalao horonantsary ary feo.
Inona no hataon'i Apple amin'ny taona 2019 ho avy? Izany rehetra izany no mbola tsy tonga tamin'ity taona ity ary manantena ny hahita ny manaraka isika
Inona no hataon'i Apple amin'ny taona 2019 ho avy? Ity no zavatra antenainay hahita sy tadiavinay avy amin'ny Apple amin'ny taona ho avy.
Ny tranga mety hitranga amin'ny iPad Mini vaovao dia voasivana, miaraka amina lavaka ho an'ny flash ao amin'ny fakan-tsary
Nisy sary iray navoakan'ny tranga mety hitranga amin'ny iPad Mini ho avy ary hanana flash ho an'ny fakantsary na fakan-tsary roa.
Google dia efa mamela anao hanaraka ny lalan'i Santa Claus amin'ny alàlan'ny fitaovany toy ny isan-taona
"Google Santa Tracker", fitaovana Google mamela anao hanaraka ny lalan'i Santa Claus, dia efa azon'ny rehetra avy amin'ny tranokalany izao. Jereo!
Ny ekipa Soy de Mac dia mirary Krismasy sambatra ho anao
Mpamorona iMazing Leaves Setapp Platform
Ny developer iMazing dia mandao ny sehatra Setapp. Izy dia iray amin'ireo mpanorina, fa ny maodelim-pandraharahana ankehitriny tsy mifanaraka
Apple Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny fampahalalana vaovao momba ny fifamoivoizana sy ny atin'ny seranam-piaramanidina
Apple Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao vaovao momba ny fifamoivoizana sy ny atin'ny seranam-piaramanidina, manerantany. Mora kokoa ny mandamina dia
Karatra asa, beta ho an'ny rehetra, Apple Music miaraka amin'i Alexa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Fa maninona no esorina ny Apple ID ary ahoana no fomba hanaovany azy maharitra?
Fa maninona no esorina ny Apple ID ary ahoana no fomba hanaovany azy maharitra? amin'ny dingana tsotra sy izay data sisa amin'ny mpizara Apple
Ahoana ny fomba hijerena an-tserasera raha nomena ny tapakilan'ny loteria Krismasy anao
Jereo eto hoe ahoana no ahafantaranao raha ny ampahafolon'ny loteria Krismasy 2018 dia omena vola be nefa tsy mametraka na inona na inona, mivantana amin'ny Internet, haingana sy mora.
Apple manavao ny tranokalany mangarahara ao amin'ny governemanta miaraka amina endrika mahaliana kokoa
Apple dia nanamboatra ny tranokalany mangarahara tanteraka tamin'ny alàlan'ny tatitry ny governemanta, miaraka amin'ny angon-drakitra misimisy kokoa mifandray.
Azonao atao izao ny mividy ny Blackmagic eGPU Pro ao amin'ny Apple Store
Ny Blackmagic eGPU Pro dia azo vidiana amin'ny Apple Store Online, na dia tara aza ny fandefasana azy hatramin'ny Janoary. Ny fampahalalana rehetra.
PhotoScape X sary editor dia nohavaozina miaraka amin'ny endri-javatra vaovao manan-danja
Ny mpamoaka sary PhotoScape X dia novaina miaraka amina endrika vaovao manan-danja mifandraika amin'ny sivana, teboka maivana ary fanatsarana ny fiasa ankehitriny
John Giannandrea dia lasa SVP an'ny paikadin'ny fianarana milina sy ny paikadin'ny artifisialy Apple
John Giannandrea dia efa ao anatin'ny ekipa mpanatanteraka ao Apple, mandray ny andraikitry ny filoha lefitra zokin'ny Machine Learning ary maro hafa.
Ny Mpanampy Google dia mikapoka ny HomePod amin'ny valiny marina, saingy tena akaiky izy ireo raha ny fahazoana
Ny fampitahana vao haingana dia manome satroboninahitra ny Google Home ho mpandaha-teny mahay indrindra amin'ny lafiny AI, fa ny HomePod miaraka amin'i Siri dia tsy ao aoriana ihany koa.
Mankalazà ny Noely miaraka amin'ny MacXDVD ary mahazoa iPhone XR, lisansa malalaka ary maro hafa
Afaka mahazo lisansa maimaimpoana ho an'ny MediaTrans, VideoProc ianao izao ary misaotra bebe kokoa tamin'ny fampiroboroboana ny Noely MacX, ary na dia iPhone XR na Apple Watch aza.
Apple dia hanome ny fividianana ao anatin'ny fampiharana an'ny App Store ho an'ny namana sy fianakaviana
Tsy ela dia avelan'i Apple hanome ny fividianana mpampiasa hafa ao anatin'ny fampiharana (in-app) avy amin'ny App Store. Jereo eto!
Azo alaina izao ny Safari Technology Preview 72
Apple Music dia tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'i Alexa
Apple dia namoaka ny beta faharoa an'ny watchOS 5.1.3 ho an'ny mpamorona
Apple dia mamoaka ny beta faharoa an'ny watchOS 5.1.3 ho an'ny mpamorona. Ny fanavaozana dia manamboatra bibikely sy tsy fitoviana amin'ny rafitra
Podcast 10 × 13: Fintino ny taona 2018
Herinandro, nivondrona ny ekipa Actualidad iPhone y Soy de Mac handraikitra ny podcast farany tamin'ny taona, mamintina ny taona 2018.
Hiverina amin'ny fahitalavitra miaraka amin'i Apple i Snoopy
Hiverina amin'ny efijery kely i Snoopy miaraka amin'ny serivisy video streaming Apple ho avy.
Apple dia manomboka mivarotra tranga ho an'ny AirPods an'ny antoko fahatelo ao amin'ny magazay an-tserasera (any amin'ny faritra sasany ihany)
Apple dia nanomboka nivarotra tranga fanontana manokana ho an'ny Catalyst AirPods ao amin'ny fivarotana an-tserasera any Etazonia.
Ny fividianana AirPods na Apple Watch amin'ny Apple amin'ity volana ity dia sarotra
Apple dia hazaza amin'ny alàlan'ny Twitter ho an'ny Android amin'ny kaonty Apple Music
Tamin'ny volana lasa teo, avy any Apple dia namoaka bitsika tao amin'ny kaonty Apple Music, izay nampiasan'izy ireo ny mpanjifa Android. Jereo eto!
Apple dia nifanaraka tamin'ny talen'ny sarimihetsika Fast and Furious marobe
Ny serivisy horonan-tsarimihetsika Apple dia hampidirina ao anaty katalaogin'ny andiany, vokatra avy amin'ny talen'ny sarimihetsika Fast and Furious marobe, Justin Lin.
Apple dia mandefa fampianarana mora vaovao ao amin'ny YouTube ho an'ny mpampiasa Apple Watch
Apple dia namoaka fampianarana video tsotra vitsivitsy mifandraika amin'ny Apple Watch sy watchOS amin'ny alàlan'ny fantsona YouTube azy. Jereo!
Sphero dia mamela ny fahazoan-dàlana ofisialin'ny vokatra Disney. Veloma amin'ny BB-8 sy R2-D2
Horonan-tsary vaovao nataon'i Paul McCartney Momba ny Fanararaotana, azo jerena manokana ao amin'ny Apple Music
Ny horonantsary vaovao nataon'i Paul McCartney dia fiantsoana an-tsary an'ireo ankizy izay iharan'ny herisetran'ny namany hatrany
Adobe XD dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Adobe XD dia nahazo fanavaozana vaovao, izay ifantohany amin'ny fanovana rakitra ao anaty rahona miaraka amin'ny Creative Cloud sy zavatra vitsivitsy hafa.
Ny T2 Chip dia miaro ny Mac amin'ny fanandramana fidirana amin'ny teny miafina sandoka
Ny T2 Chip dia miaro ny Mac amin'ny fanandramana fidirana amin'ny teny miafina sandoka, manidy tsikelikely ny rafitra.
Eny, ING dia ho hita any Alemana miaraka amin'ny Apple Pay
Nisy olona nandoa $ 6.000 mahery ho an'ny taratasim-pandraharahana Steve Magazine sy ny sonian'ny magazine
Ny karatry ny raharaham-barotra taloha nataon'i Steve Jobs dia namidy tao amin'ny RR Auction $ 6.000 mahery. Jereo eto!
Ny famatsiam-bola amin'ny Apple amin'ny fiverenana 0% ho an'ny fampielezana ny Noely
Noho io antony io Apple dia mifikitra amin'ny famokarana ny Macs ivelan'ny Silicon Valley
Noho io antony io, Apple dia mifikitra amin'ny famokarana ny Macs ivelan'ny Silicon Valley. Ny zavatra niainan'i Apple dia tsy tsara, namindra ny famokarana any amin'ny firenen-kafa
Atsaharo ny horonan-tsary mandeha ho azy ao amin'ny Mac App Store
Atsaharo ny horonan-tsary mandeha ho azy ao amin'ny Mac App Store. Azonao atao ny manafoana io safidy io sy hitahiry angona avy amin'ny safidinao.
Hitsahatra tsy hanohana ny Mac amin'ny OS X Yosemite sy ny kinova taloha momba ny rafitra fiasa ny Steam
Manomboka amin'ny 2019, Steam dia tsy hifanaraka amin'ireo Mac izay mbola manana OS X Yosemite napetraka na kinova taloha kokoa, jereo eto!
Platoon ho an'ny Apple, fampandrenesana fanosehana ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Raha mampiasa OS X Yosemite ianao dia aza manavao ny kinova iTunes farany
Dav1d ho an'ny macOS ny decoder voalohany ho an'ny codec AV1
Dav1d ho an'ny macOS ny decoder voalohany ho an'ny codec AV1. Ao ambadik'ity tetikasa ity miaraka amin'ny anarana Alliance for Open Media dia ny ekipa VideoLAN (VLC) sy FFmpeg
Azonao atao izao ny mampiasa Apple Music miaraka amin'ny mpandahateny mahay Alexa sy Amazon Echo
Ny serivisy mozika streaming Apple Music izao dia tohanan'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny mpandahateny Alexa sy Amazon Echo any amin'ny faritra voafantina, fantaro!
Inona ny teny miafinao ampiasana amin'ny Mac-nao? «123456» dia satro-boninahitra ho an'ny taona faha-5 nifanesy izay be mpampiasa indrindra
Inona ny teny miafinao ampiasana amin'ny Mac-nao? Ny "123456" dia satro-boninahitra ho an'ny taona faha-5 nifanesy izay be mpampiasa indrindra
Doka Apple telo eo amin'ny tsara indrindra amin'ny taona 2018 hoy ny Adweek
Raha ny filazan'ny masoivohon'ny Adweek, dokam-barotra Apple telo no isan'ireo 25 voalohany niseho tamin'ny tsara indrindra nandritra ny taona 2018.
Connect dia dingana iray miala amin'ny fanjavonana amin'ny Apple Music
Apple hanavao tanteraka ny Store Apple Apple
Araka ny sary efa tafaporitsaka dia mikasa ny hanavao tanteraka ny Apple Store miorina ao amin'ny Leox Mall any Atlanta i Apple.
JJ Abrams hitarika andian-tsarimihetsika Apple notontosain'i Jennifer Garner
Hihaona indray i JJ Abrams sy i Jennifer Garner noho ny andiany vaovao novokarin'izy ireo ho an'ny serivisy streaming video an'i Apple.
Apple dia miomana ny handefa ny Netflix amin'ny magazine
Apple dia afaka mandefa ny serivisy fisoratana anarana isam-bolana vaovao, amin'ity magazine ity, amin'ny fiandohan'ny taona taorian'ny nividianany ny orinasa Texture.
Tamara Hunter dia manatevin-daharana an'i Apple ary izy no ho lohan'ny casting VOD
Ny fanaovan-tsonia Apple farany ho an'ny seho horonantsary mivantana dia Tamara Hunter, tompon'andraikitra iray avy amin'ny Sony izay hanara-maso ny casting.
OneNote for Mac izao dia manohana ny Touch Bar
OneNote for Mac dia efa mifanaraka amin'ny Touch Bar. Ny asan'ny Touch Bar dia mifanaraka amin'ny ampahan'ny interface misy antsika.
Ny fomba hanaovana ny Mac dia mampitandrina anao isan'ora amin'ny teboka
Jereo eto ny fomba ahafahanao manao ny Mac anao hamaky mafy aminao ny fotoana isaky ny amin'ny enina, amin'ny antsasak'adiny, na amin'ny telovolana amin'ny fomba tsotra.
Podcast 10 × 12: Mpinamana sa fahavalo?
Podcast 10x12: Mpinamana sa fahavalo?
Ahoana no ahafantaranao raha manana fitetezana manokana ianao afaka ao amin'ny Safari miaraka amin'ny maizina maizin'i Mojave
Ahoana no ahafantaranao raha manana fitetezana manokana ianao afaka ao amin'ny Safari miaraka amin'ny maizina maizin'i Mojave. Mampianatra anao hanavaka azy izahay
Ny kaody MacOS Mojave dia manondro ireo GPU vaovao Vega izay mbola tsy nambara
Ny taranaka MacBook Pro manaraka dia mety ho avy amin'ny tanan'ireo sary AMD Vega vaovao
Apple dia mbola tsy miverina amin'ny tsenambola sy ny ahiahy
Nanamafy i Supermicro fa tsy misy chips "malicious" any Apple sy Amazon
Manamafy i Supermicro fa tsy misy chips "manisy ratsy" any Apple sy Amazon
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fampandrenesana fanerena ireo pejin-tranonkala ao Safari
Sela sensor ho an'ny AirPods 2?
Apple Pay dia efa misy any Alemana miaraka amin'ny fanohanan'ny banky 15
Taorian'ny tsaho sy fanombantombanana am-bolana maro dia efa tonga any Alemana ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy tariby Apple.
Ny fahatongavan'ny asan'ny ECG an'ny Apple Watch Series 4 eo am-pelatanan'i Apple
Ny fahatongavan'ny asan'ny ECG an'ny Apple Watch Series 4 eo am-pelatanan'i Apple. Ny governemanta tsirairay avy dia tsy maintsy manao lalàna amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo.
Ity herinandro ity dia toa ny iray voafaritra amin'ny fahatongavan'i Apple Pay any Alemana
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny haitao fandoavam-bola an'ny Apple, Apple Pay, dia mety ho tonga any Alemana amin'ity herinandro ity.
Ny AirPower akaiky sy akaiky kokoa: misy patanty vaovao mampiseho amintsika ny fomba fiasan'izy io
Patanty vaovao no nanambara ny fomba fiasan'ny AirPower, ary ny zavatra hataon'i Apple hampandeha azy soa aman-tsara. Jereo eto!
Adikao ary apetaho eo anelanelan'ny fitaovana avy amin'ny Mac anao sy ny mifamadika amin'izany
Ny Bordeaux Apple Store dia voaroba nandritra ny rotaka Yellow Vest
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba nanetsiketsahan'ny mpanohitra ny akanjo mavo marobe ny Apple Store ao Bordeaux.
Google Chrome dia hanohana ny maody maizin'ny macOS Mojave amin'ny fiandohan'ny taona 2019
Google dia miasa mba hanolotra maody maizina izay mety hifanaraka amin'ny macOS Mojave tsy ho ela. Ny fanombohana an'io fampiasa io dia andrasana amin'ny voalohan'ny taona ho avy.